Ifulethi elihle e-Hurlingham Sandton - I-Airbnb
Ifulethi elihle e-Hurlingham Sandton
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Michael & Melissa
U-Michael & Melissa Ungumbungazi ovelele
Imibhede yethu egqamile nesanda kulungiswa ilungele abaphathi abasebenza e-Sandton noma izivakashi zase-Sandton. Indlu yethu ivikeleke kakhulu, ngesistimu ye-alamu, ama-beams, uthango lukagesi, i-TV kanye nokusabela okuhlomile. Iyunithi iyimfihlo futhi ibukeka kahle engadini. I-inthanethi esheshayo kakhulu @ 20mb. Ukufinyelela okusheshayo e-Sandton okuyimizuzu engu-5 yokuhamba nge-Uber. Ukupaka okuphephile kwezimoto ezingu-2.
Ifulethi lesimanjemanje, futhi elimiswe ngokuphelele ukuze abantu abangashadile noma abashadile bajabulele ukuhlala isikhathi esifushane. Sinikeza i-inthanethi esheshayo kakhulu ukuze sikugcine uxhumekile. Ifulethi linekhishi elincane elinama-microwave, ifriji, iketela nezitsha ukuze wenze ukuhlala kwakho kube mnandi. Sicela uqaphele ukuthi alikho isitofu noma uhhavini. Inezitokwe netiye, ikhofi nama-ruski.
4.85 · 309 okushiwo abanye
I-Hurlingham iyindawo ezimele ngokuphelele futhi eyingqophamlando yezivakashi zase-Sandton. Izivakashi zebhizinisi yimizuzu engu-5 kuphela ukusuka e-Sandton CBD. Sihlezi phakathi kwe-Sandton City ne-Hyde Park Corner shopping center kulabo abadinga ukwelashwa okuncane kokuthengisa.
Ibungazwe ngu-Michael & Melissa
Siyakujabulela ukukusiza nganoma yisiphi isikhathi emini noma ebusuku, sikunikeze iseluleko nge-Sandton, lapho ungaya khona ukuze uthole ukudla noma ukuzijabulisa.
UMichael & Melissa Ungumbungazi ovelele